पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत हुनुका यी हुन् कारण
एजेन्सी, २७ चैत्र । इमरान खान सत्तामा आएपछि पाकिस्तानलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने आशाका रूपमा हेरिएको थियो । तर, ४४ महिनापछि अविश्वासको प्रस्तावका कारण इमरानलाई सत्ताबाट हटाइएपछि यी सबै आशाहरू उल्टो साबित भए । पाकिस्तानमा मुद्रास्फीति चरम सीमामा छ र त्यहाँको जीडीपी र रुपैयाँ दुवैको अवस्था कमजोर छ। इमरानलाई सत्ताबाट हटाउनुको मुख्य कारण के थियो ? […]
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त
काठमाडौं, २७ चैत । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त भएका छन् । खान विरूद्ध संसदमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । शनिबार मध्यरातमा संसदमा भएको मतदानमा खानको विपक्षमा १७४ सांसदले मतदान गरेपछि उनले विश्वासको मत गुमाएका हुन् । पाकिस्तानको नेशनल एसेम्बलीमा ३४२ सदस्य छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा १७४ मत परेको […]
काठमाडौंं, चैत २७ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा १७४ जना सदस्यले मतदान गरेपछि पदमुक्त भएका हुन् । इमरान खानको सरकारले संसद् विघटन गरी तत्काल चुनावको तयारी अघि बढाउने घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। प्रधानमन्त्री इमरानविरुद्ध गत मार्च २८ […]
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा १७४ जना सदस्यले मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको बीबीसीले जनाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै इमरान खान पदमुक्त भएका छन् । उनको सरकारले संसद् विघटन गरी तत्काल चुनावको तयारी अघि बढाउने घोषणा गरेपछि आक्रोशित प्रतिपक्षी दलका नेताहरू संसद्‌मा मतदान रोक्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। बिहीबार पाकिस्तानको स
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भएका छन्। शनिबार अबेर राति संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा उनले आवश्यक सांसदको साथ पाउन सकेनन् । विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको मतको पक्षमा आवश्यक मत परेको हो। ६९ वर्षका इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव मार्फत सत्ताच्यूत हुने पहिलो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसअघि उपसभामुखले अविश्वास प्रस्तावलाई संविधान विपरित भनेर मतदान प्रक्रिया […]
अप्ठ्यारोमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् । खान नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् । खान नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र अव्यवस्थित गराएको विपक्षीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तल्लो सदन नेसनल एसेम्बलीमा बिहीबारबाट अविश्वासको प्रस्तावमाथि बहस सुरु हुनेछ र सात दिनभित्र मतदान हुनेछ । तल्लो सदनमा […] The post अप्ठ्यारोमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
पाकिस्तानका विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् । खान नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् । खान नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र अव्यवस्थित गराएको विपक्षीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तल्लो सदन नेसनल एसेम्बलीमा बिहीबारबाट अविश्वासको प्रस्तावमाथि बहस सुरु हुनेछ र सात दिनभित्र मतदान हुनेछ । तल्लो सदनमा विपक्षी नेता सहबाज सरिफले सोमबार खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।‘यस सदनको विश्वास गुमाएप
इमरान खान मिडियाविरुद्ध खनिएपछि…
एजेन्सी, ७ चैत्र । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान पछिल्लो समय देशको मिडियाविरुद्ध खनिन थालेका छन् । उनले मिडियाले देशबाहिरबाट रकम पाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । नाम उल्लेख नगरी विभिन्न उद्देश्यका देशभित्रका संस्था र बाहिरी मुलुकबाट रकम प्राप्त गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । खानले यस्तो आरोप लगाएपछि पाकिस्तानको पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरुको संगठन द काउन्सिल अफ पाकिस्तान […]
भारतीयको पोस्टर चोरेपछि विवादमा घेरिए पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अहिले विवादमा तानिएका छन् । आफ्नो सरकारको प्रचार गर्नका लागि सार्वजनिक गरिएका पोस्टर र ब्यानरमा भारतीय जनताको फोटो समावेश गरेको आरोप विपक्षीहरुले उनीमाथि लगाएका हुन् । तीन वर्षका उपलब्धिको बयान पाकिस्तानमा इमरान खान प्रधानमन्त्री चुनिएको तीन वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा उनले आफ्ना उपलब्धिबारे जनतालाई जानकारी दिन र आफ्नो पार्टी पिटिआईको प्रचार गर्नका लागि पोस्टर, ब्यानर र पर्चा छपाउन लगाएका थिए । आगामी चुनावको तयारीलाई समेत मध्यनजर गरेर यस्तो गरिएको थियो
किन गए इमरान खान साउदी अरब?
एजेन्सी। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान साउदी अरबको तीन दिने भ्रमणमा हिजो शुक्रबार त्यता पुगेका छन्। दुई देशबीच वर्षौंदेखि रणनीतिक सम्बन्ध बलियो भए पनि क्षेत्रीय मुद्दाबारे हालैका दिनमा मनमुटाव पैदा भएको छ। २०१८ मा पाकिस्तान आर्थिक तनावमा रहेका बेला साउदीले तीन अर्ब २० करोड डलर ऋण दियो। तर पनि दुई देशबीच सफा सम्बन्ध बन्न नसकेको अवस्थामा खान साउदी गएका हुन्।